Nkume ndị na-enye obi ụtọ bụ ihe na-ewu ewu n'oge okpomọkụ. Mkpụrụ anya moccasins na-eme ka ọ dị mma maka ihu igwe ọkụ ma ọ bụ oge ọkụ. Moccasins mara mma na ndụ kwa ụbọchị, mepụta ezumike dị jụụ na ezumike ma nabatara n'ọtụtụ ọfịs azụmahịa. A na-eme ha na nsụgharị siri ike ma ọ bụ na-atụgharị anya na nkọwa dị iche iche n'ụdị iko ma ọ bụ ụta. Ụdị ihe ndị e ji emepụta ihe eji eme ka ọ bụrụ ihe ndị e ji edo edo, bụ ndị a na-eji ejiji ma ọ bụ rhinestones.
Kedu àgwà ndị ị ga-ahọrọ?
Ndị na-emepụta ihe ndị dị na moccasins na-enye ụmụ nwanyị nnwere onwe zuru oke ịhọrọ ụda ụdị. Azụ ụlọ ahịa jupụtara na akpụkpọ ụkwụ dị mma nke na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ na-acha chaa chaa. Ọ bụrụ na nwanyị na-agba agba agba anaghị anabata ya, ị nwere ike ịhọrọ aja aja ma ọ bụ nwa na-acha odo odo maccasins. Ọdịdị dị nro nke agba aja aja, acha anụnụ anụnụ na burgundy dị mma ma n'oge ọkọchị na n'oge mgbapụta. Enwere ike ikwe ka a na-arụ ọrụ n'enweghị nsogbu ọ bụla ruo mgbe mmalite nke oyi ma ọ bụ nke mmiri ozuzo. Na okpomọkụ, a na-edozi obere palette ma ọ bụ agba agba.
Suede moccasins jikọtara ya na ọtụtụ uwe dị iche iche, nke dị n'ime uwe ejiji ndị inyom. Ha na-adaba n'okporo ámá ma ọ bụ ịzụ ahịa, na gbakwunye kwa ụbọchị ahụ. Dika afọ, ọnọdụ ma ọ bụ ụdị ejiji, ị nwere ike ijikọta nhọrọ ndị a:
Ịghara ịta ahụhụ n'ihi ọkụ na tebụl ndị dị mkpa nke uwe na-acha anụnụ anụnụ, uwe mwụda na uwe akwa na-enyere aka. Echiche ndị dị mma nwere ike inyere gị aka ịkwado ihe mgbochi ejiji nke ìhè dị mma. Nwunye mara mma ga-eme ka ụkwụ kwụsie ike, ma nwee ike ịdị ọcha nke ga-arụ ọrụ n'àgwà nwanyị nwere obi ike .
Moccasins bụ ezigbo ngbanwe maka akpụkpọ ụkwụ na akwa ụkwụ, ma ọ bụrụ na ị ga-agba ọsọ, na-azụ ahịa ma ọ bụ na-arụ ọrụ n'ụlọ. Ha ji akwa linin ma ọ bụ akwa denim mara mma. Ole na ole na-eme ka ndị na-acha uhie uhie na-eme ka ọ dị mma kwa ụbọchị, nke na-achọsi ike imeghachi ya na ngwa.
Bordeaux ma ọ bụ na-acha anụnụ anụnụ suede moccasins na-ele anya n'ụzọ doro anya ma dị mma, ha ejizi uwe na uwe ma ọ bụ ejiji dị n'elu ikpere. Iji mee ka onyinyo ahụ bụrụ ihe enyemaka nke enyemaka dị obere n'akụkụ n'ụdị brushes ma ọ bụ ihe ọkụkụ.
Ọchịchị n'ozuzu bụ na moccasins na-eyi na ụkwụ ụkwụ. Dị ka ihe ọzọ, ịnwere ike imetụ akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ, ma ọ bụrụ na ngwa ahụ jupụtara na uwe.
Olga Nikishicheva - akwa ejiji
Uwe na mkpuchi
Sheepskin site na ncha
Ejiri uwe mara mma mara mma
Ihe Odide Ndị Dị Oké Ọnụ Ahịa
Kedu otu esi ahọrọ bra site nha?
Nwa nwanyị na-ekpo ọkụ jaket
Uwe A na-acha Uhie
"Ọrịa mmalite mmalite" bụ ọrịa ndị nne na nna n'oge a
Niki Minage katọrọ ndị nwere nkwarụ
Papillomas na labia
Inweghi oke ọbara
Ejiji ejiji maka Hair 2014
Egwu na motley
Ejiji ala Jaketị - oge oyi-oyi 2016-2017
Ime ime ahụ
Potato casserole na ọkụkọ na oven
George Clooney, Julia Roberts na Gwen Stefani ghọrọ ndị ọbịa "Carpool Karaoke"
Karịa ịgwọ ụkwara site na nwa ọhụrụ?
Na-ejupụta "Mkpụrụ vaịn"
Mollusc na ụmụaka
Arthroscopy nke nkwonkwo ụkwụ - ihe niile ịchọrọ ịma banyere usoro ahụ
Kedu ihe m ga-esi nri maka nri abalị gala?
Kedu ihe dị mfe iji mee ego?